Secretary Archives - Glory Assumption Space
Secretary – Male - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက်)
၁) Secretary – Male - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက်) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •	Secretary ရာထူးဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ •	English စကားပြော အခြေခံရရမည်။ •	ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ •	Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	နေ၊စား စရိတ်ငြိမ်းနေနိုင်သူဦးစားပေးမည်။ •	တပတ် ( ၁ ) ရက်ပိတ်သည်။ •	မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော FMCG Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော FMCG Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Secretary – Male (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
၁)Secretary – Male (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • အသက် (၃၀)နှစ် အောက်ဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ • Foreigner ၏ Secretary လုပ်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • Computer Microsoft Office, Excel , Internet & Email ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၃၀ မှ ညနေ ၅း၃၀ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ • စနေ မနက် ၉း၃၀ မှ နေ့လည် ၁း၀၀ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ Seafood Export & Import Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
၁) Secretary – Female – ( 10 ) Posts - လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - တာမွေမြို့နယ် ။
၁) Secretary – Female – ( 10 ) Posts - လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - တာမွေမြို့နယ် ။ • Secretary လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • English (4) Skills ကျွမ်းကျင်ရမည် ။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည် ။ • ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီ မှ ညနေ ( ၅:၃၀ ) ။ • ယူနီဖောင်း မရှိပါ ။ ဖယ်ရီ မရှိပါ ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်ပါသည် ။ • အ၀တ်အထည် Manufacturing Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ မှတျခကျြ ။ ။ လျောက်ထားလိုသညျ့ရာထူးမြားကို တဈပါတညျးဖျေါပွပေးကွပါရနျ နှငျ့ CV Form မြားတှငျ Passport ဓာတျပုံ တဈပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးပါရနျမတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ Email ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ လူကိုယျတိုငျလညျးကောငျး လာရောကျ လြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ Viber ဖွငျ့ CV ပို့မညျဆိုပါက ဓာတျပုံသခြော ကွညျလငျပွတျသား စှာရိုကျ၍ ပေးပို့ပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခနျးလိပျစာ – ခွံအမှတျ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေြာငျးလမျး ၊ ၉ မိုငျ ၊မရမျးကုနျးမွို့နယျ ။ ( ပွညျလမျး ၊ ၉ မိုငျ မှတျတိုငျတှငျ ဆငျးရနျ ။ Ocean North Point နှငျ့နီးပါသညျ ။ )
1. Secretary – Female (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိုနှိုင်း) / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။
1. Secretary – Female (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိုနှိုင်း) / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။ • English (4) Skill ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် (မနက် ၉း၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅း၃၀ အထိ) • တနင်္ဂနွေနေ့ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်ပါသည်။ • ဖယ်ရီစီစဉ်ပေးထားပါသည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ပေါ်မူတည်၍ လစာညှိုနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ • စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ • Cosmetic Distribution ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Cosmetic Distribution ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။
1. Secretary – Female (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / တာမွေမြို့ နယ်။
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တာမွေမြို့ နယ်ရှိ Fashion Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Secretary – Female (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / တာမွေမြို့ နယ်။ - ဘွဲ့ ရ ဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Secretary လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။ - အဝတ်အထည်ပိုင်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00 AM to 5:30 PM) , တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ - တာမွေမြို့ နယ်ရှိ Fashion Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09 262223785, 09 262223784, 09-263121101 Viber Phone Number –09262223784 , 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Secretary – Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ် Golf Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Secretary – Female (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် မှ ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Secretary သင်တန်းတက်ရောက်ဖူးသော လက်မှတ်ရှိရမည်။ • သွက်သွက်လပ်လပ်ရှိရမည်။ Personal ကောင်းရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ • English (4) Skill ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • Computer Microsoft Office, Excel , Power Point ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • အသက် (၂၀ - ၂၈)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • Schedule ဆွဲဖူးသူဖြစ်ရမည်။ • ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ • တစ်ခါတစ်ရံနယ် (သို့) Oversea ထွက်နိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် ( 8:30 – 6:00 ) • စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်ပါသည်။ • ဖယ်ရီရှိသည်။ (၃)လပြည့်လျှင် ယူနီဖောင်းပေးသည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ • မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နှင့် အနီးတစ်ဝှိုက်နေထိုင်သူများ ဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Office Secretary –Female (5) Posts /လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်(ညှိနှိုင်း) / မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Manufacturing တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - English/Chinese ကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Office Secretary အတွေ့ အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Secretary - female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ ဆေး Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Secretary – Female – (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။ - Graduate. Under (40) years old. - Must have at least3years experience in related field. - Fluent in written and spoken English is an asset. - Must be computer literate & able to use email & internet as well as type in Myanmar language properly. - Must have good communication skills & must possess honest, hard working characteristics. Able to translate both Myanmar & English. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိAluminiumCompanyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။
Secretary – Female (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / ဘုရင့်နောင်မြို့နယ်/လှိုင်သာယာမြို့နယ်
English အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော၊ ကျွမ်းကျင်ရမည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ် ရှိရမည်။
အလုပ်ချိန် ( 8:30 – 5:30 )
မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_2803" align="alignnone" width="424"] Young happy businesswoman talking on the phone and writing notes in office[/caption]
Secretary – Female - (5) Posts
Location in : Dagon Seikkan
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဆေး Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Secretary – Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • English စကားကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ • အတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ • အသက် ၄၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ • Ferry ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_2733" align="alignnone" width="300"] Portrait ofayoung attractive business woman.[/caption]
Secretary – Female - (3) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Jewellery Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Secretary – Female - (3) Posts /လစာ - ညှိနှိုင်း / ကမာရွတ်မြို့ နယ်။ - ဘွဲ့ ရ (သို့ ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ။ - English ကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်ရမည် ။ - Secretary Experience2နှစ်။ - အသက် 22 မှ 30 နှစ် အထိ။ - Jewellery Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ။ - Ferry ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262555437 , 09 262223785, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Sectary (or) Senior Staff- Female (5) Posts/Salary- 250,000 Kyats
1. Sectary (or) Senior Staff – Female (5)Posts / Salary – 250,000 Kyats /Pazundaung Township. - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၀) နှင့် (၂၅) ကြားဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၁) နှစ်ရှိရမည်။ - English (4) Skill ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်ရမည်။ - အစိုးရ နှင့် ပက်သက်သည့် Visa ရုံးများသို့ ၀င်ထွက်ဖူးရမည်။ - Export and Import ပိုင်းအားသိရှိရမည်။ [caption id="attachment_2071" align="alignnone" width="2053"] Business woman at work[/caption]
Secretary(Admin Staff) –Female-(5) Posts /Salary -200,000 Kyats
မင်္ဂလာပါရှင်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်(သမိုင်း)တွင်ရှိသော ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1.Secretary(Admin Staff) –Female-(5) Posts /Salary -200,000 Kyats/ Thamine Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ - Secretary (or) Admin ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည် ။ - ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-262223784 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Secretary –Male /Female-(5) Posts/Salary -1000000 (Above)
မင်္ဂလာပါ ။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Companyကြီးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Secretary –Male /Female-(5) Posts/Salary -1000000 (Above)/Tharkayta Township -	Secretary for General Manager -	Chinese (4 skills) & English (4 skills) -	Experience 2-3 years -	Officeပိုင်း အတွေ့အကြုံရှိပြီး Secretary အတွေ့ အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Emailဖြင့်လည်းကောင်း၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr4@gmail.com gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com -	Phone	No.-09-263119775 ,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Secretary - Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိပါသည်။ 1. Secretary – Male (5)Posts /Salary – 500000 Kyats above /Bahan & South Okkalapa Township - Any Graduate - Minimum of3Years Corporte Secretary experience is required - English4Skills - Computer Full Skill မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။